शहरबासीको थकान मेटाउन बुढानिलकण्ठमा मेराकी रिट्रिट, चौधरी ग्रुपको १० करोड लगानी – Clickmandu
शहरबासीको थकान मेटाउन बुढानिलकण्ठमा मेराकी रिट्रिट, चौधरी ग्रुपको १० करोड लगानी
कलमकुमार बस्नेत २०७६ वैशाख २७ गते १४:५७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । शहरदेखि नजिक तर शान्त वातावरणमा सप्ताह मनाउने कुनै योजना छ ? वा प्राकृतिक उपचार विधि चाहिएको छ ? यदि त्यसो हो भने चौधरी समूहले बुढानिलकण्ठमा केही दिनअघि सुरु गरेको ‘मेराकी वेलनेस रिट्रिट’ तपाईंका लागि उपयुक्त गन्त्व्य हुनसक्छ ।
बुढानिलकण्ठ मन्दिरदेखि ३ किलोमिटर उकालो चढेपछि मेराकी पुगिन्छ ।
शहरको व्यस्त जीबनशैलीका कारण शारीरिक तथा मानसिक थकान बढी हुनेहरुको थकान मेटाउने उद्देश्यले मेराकी सुरु गरिएको कम्पनीका निर्देशक करण चौधरीले जानकारी दिए ।
निर्देशक चौधरीका अनुसार १५ रोपनी जग्गामा फैलिएको मेराकीमा पहिले नै बनेका २ वटा भवनलाई प्रयोग गरिएको छ भने थप पूर्वाधारमा १० करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको छ ।
अरुण चौधरी विदेशमा जाँदा देखेको व्यवसाय र पछि सोच पलाएको थियो । नेपालमा पनि सुरु गर्ने योजना अन्तर्गत बुढानिलकण्ठमा पहिले नै भएको अरुण चौधरीको ‘फार्म हाउस’लाई व्यवसायिक रुप दिएका हुन् ।
मेराकीमा प्राकृतिक उपचारका विभिन्न विधि अपनाइएको छ । जसअन्तर्गत हाइबरब्यारिक ओटु चेम्बर, कोलोन हाइड्रो थेरापी, साल्ट हेलोथेरापी, साउना स्टिम तथा हट कोल्ड वाटर थेरापी जस्ता सेवा समेत उपलब्ध छ ।
३० वर्षदेखि यो क्षेत्रमा अनुभव संगालेर खारिएका मलेसियन नागरिक डोनाल्ड चा नेतृत्वको टिम मेराकीमा जानेहरुलाई पूर्ण आनन्द दिन र रिफ्रेस बनाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् ।
शहरको कोलाहलमय दैनिकीबाट एकैछिन भए पनि आराम लिन र फ्रेस हुन चाहनेका लागि यो उपयुक्त थलो हो । कम्पनीले ग्राहकले लिने सेवा र बिताउने समयका आधारमा सेवा शुल्क समेत तोकेको छ ।
मेराकीको व्यवस्थापन हेरिरहेका डोनाल्ड चाका अनुसार २५ सयदेखि १० हजारसम्मका सेवा उपलब्ध गराइएको छ । एकजना व्यक्तिले आधा दिनमात्रै बिताउँदा न्यूनतम ३५ सय खर्च गरे पुग्छ ।
त्यस्तै, पूरा दिन बिताउने हो र धेरै सेवा लिने हो भने १० हजार रुपैयाँसम्म खर्चले पुग्छ ।
कम्पनीले धेरै मानिस जम्मा गर्नेभन्दा पनि गुणस्तरीय सेवालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
‘तपाई मेराकीको सेवा लिएर फर्कदा शारीरिक र मानसिक रुपमा थकानमुक्त भएको अनुभव गर्नु हुनेछ, त्यसका लागि हामीले सेवा र सुविधालाई ध्यानमा राखेका छौं’ कम्पनीका सिनियर मार्केटिङ म्यानेजर करुण शाक्यले बताए ।
यदि तपाई धुम्रपान गर्नुहुन्छ भने तपाईका लागि मेराकीले साल्ट हेलोथेरापी उपलब्ध गराएको छ । यो थेरापीमा बन्द कोठामा नुनको तत्वलाई हावामा फैलाएर श्वासप्रवासका माध्यमबाट फोक्सो सफा गरिन्छ ।
कोठाभित्रै पनि तपाईले मसाज लिन सक्नुहुन्छ भने कोठालाई स्वीट रुमका रुपमा डेकोरेट गरिएको छ ।
त्यस्तै खाना अपच हुने तथा समग्रमा पाचन प्रक्रियामा समस्या हुनेले कलोन हाइड्रोथेरापी लिन सक्छन् । यो प्रविधि प्राकृतिक उपचारको नयाँ पद्धति हो । यस थेरापीमा पेट तथा विशेषगरी आन्द्रा सफा गर्न प्रयोग गरिन्छ ।
मेराकीमा दिनभरी थेरापी लिएर रात बिताउन चाहनेका लागि समेत सेवा उपलब्ध गराइएको छ । जसका लागि ८ वटा रुमको व्यवस्था समेत गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कोठाभित्रै पनि तपाईले मसाज लिन सक्नुहुन्छ भने कोठालाई स्वीट रुमका रुपमा डेकोरेट गरिएको छ ।
मेराकीमा सेवा दिनका लागि ३० जना स्टाफ छन् । ३० वर्षदेखि यो क्षेत्रमा अनुभव संगालेर खारिएका मलेसियन नागरिक डोनाल्ड चा नेतृत्वको टिम मेराकीमा जानेहरुलाई पूर्ण आनन्द दिन र रिफ्रेस बनाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् ।
फोटोहरु मेराकीको वेवसाइटबाट
आहा ‘मेराकी रिट्रिट’ ! शब्द, फोटो र भिडियोमा हेर्नुस्
कपाल काट्ने पेशाले दिनसक्छ ५० हजार नयाँ जागिर, युवालाई तालिमको खाँचो
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले निजी क्षेत्र उत्साहित, कार्यान्वयन गर्न माग
कोरोनाको कारण जागिर गुमाउनेलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् रोजगारी दिइने
लकडाउनले दिएको हाम्रो पीडा कसले बुझ्ने ?: उद्यमी मोहन ओझाको लेख